Faah-faahinta Kharaaraha ka Dhashay Dagaal ka Socda Dhuusamareeb. -
Faahfaahino dheerad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka weli ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ee u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu-Sunna.
Dagaalka ayaa hadda ka socda agagaarka xarunta Inji oo ay ku suganyihiin hoggaanka sare ee Ahlu-Sunna, halkaas oo uu ka bilaawday abaaro 9:00am subaxnimo ee saakay.
Inta uusan biLlaaban dagaalka Dhuusamareeb saakay waxaa toogasho meel fog ah lagu dilay Taliyihii ciidanka Haramcad ee magaalada Dhuusamareeb, xilli uu ku sugnaa geybaha sare ee dhismaha wasaaradda tamarta iyo biyaha Galmudug oo aan sidaas uga fogeyn xarunta Inji oo ay gacanta ku heyso Ahlu-Sunna.
Inta la xaqiijiyey khasaaraha dagaalka ka socda magaalada Dhuusamareeb ayaa ah dhimashada ugu yaraan 10 qof, iyo in ka badan 20 dhaawac ah, oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab ah.
Dagaalka ayaa sababay in dadka ku waxyeeloobay la gaarsii waayo cisbitaalada waayeyn ee magaalada, maadaama labada cisbitaal ee ugu waaweyn ay ku yaallaan halka uu dagaalku ka socdo.
Dagaalkan ayaa intiisa badan waxaa la isku adeegsaday qoriga hoobiyaha oo labada dhinacba ay ku garaacayeen dhismayaasha waaweyn ee magaalada, waxaana goobaha burburka badan uu soo gaaray ka mid ah xarumaha Inji, Shiirkole, dhismaha wasaaradda tamarta iyo biyaha, guriga madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo xarumo kale.